Klever Shintshanisa ukuze uqalise izici ezintsha ze-NFT | Klever Ezezimali
Klever Shintshanisa ukuze uqalise izici ezintsha ze-NFT
Kusukela ngomhlaka-17 Januwari, abasebenzisi bazokwazi ukufaka idiphozi, ukukhipha, ukuthengisa nokuthenga ama-NFT ku Klever Exchange platform.
Ukuze unikeze izinsiza ezihlukile, Klever Exchange izokhipha isevisi entsha ezovumela abasebenzisi ukuthi bafake, bakhiphe, bathenge futhi badayise ama-NFT abo.
Isici sizovumela abasebenzisi ukuthi baxhume izikhwama zabo bese befaka uhlu lwama-NFT endaweni yesikhulumi. Ukwengeza, inkundla izoba nokuhlanganiswa kwe-web3 okuzovumela umsebenzisi ukuthi axhumane nayo ngqo Klever Wallet (iyeza maduze), i-Wallet Connect, i-Tronlink, nokunye okuningi.
Ukunikeza imininingwane eyengeziwe ngalokhu, uFelipe Rieger, Umphathi Womkhiqizo we Klever I-Exchange and Head of NFT ithe, “Isici sizoba bukhoma ngomhlaka-17 January 2022. Ngaphandle kokuhweba ngama-NFTs, abasebenzisi bangahweba nge-cryptocurrency eyodwa. Klever I-akhawunti ye-ID."
Klever I-Exchange inike amandla indawo yemakethe ye-NFT kuplathifomu yabo, ezoxazulula inkinga ebikhona ngaphambilini mayelana nokutholakala kwe-NFTs ukuze kuhwetshwe ngayo. Ama-NFT asephenduke indawo yokuthuthukiswa ebaluleke kakhulu emhlabeni we-crypto, njengoba kunemiklamo emisha eyethulwa nsuku zonke.
Ama-NFT angadalwa kuma-blockchain ahlukahlukene, kodwa izimali eziphakeme zegesi zikhathaza abadali, abaqoqi, nabathengi kanye Klever I-Exchange ixazulula le nkinga.
Ukubuza u-Rieger mayelana nezinkokhelo Klever, uthe, "Klever I-NFT Marketplace iyindawo yemakethe emaphakathi, lokho kusho ukuthi ukugcinwa kwama-NFTs kuhlala nathi. Ngakho-ke, umsebenzisi akazikhokhi izimali zeBlockchain ukuze afake ohlwini, abhide noma athenge ama-NFT. Umdayisi we-NFT uvele akhokhe imali ephansi kakhulu uma kuphela i-oda seliqediwe, hhayi njenge-Ethereum kanye neZimakethe ezihlukaniselwe izwe, lapho kukhokhiswa khona izimali ezinkulu zegesi ngokufaka kuhlu, ukubhida noma ukudlulisa ama-NFT ngezinkontileka ezihlakaniphile.”
Ukuze uqale, Klever I-NFT Marketplace izoqala ngokuqoqwa kwe-Devikins NFTs bese kamuva isakaza kwamanye amaqoqo e-NFT. Kodwa-ke, ukushintshanisa namanje akubavumeli abasebenzisi ukuthi bakhe ama-NFT noma bawahlanganise, njengoba sigxile kokuqukethwe okukhethiwe kwama-NFT akhethwe ithimba lethu. Once KleverInetha eliyinhloko le-Chain libukhoma, sizocabanga ngakho, kusho uRieger.
KleverUchungechunge kulindeleke ukuthi lwethulwe ngomhla zingama-31 kuNdasa wezi-2022.
Ngokushesha nje lapho kwethulwa kwenzeka, Abaqoqi be-NFT bakwa-Devikins bangaqala ukufaka futhi bafake kuhlu ama-NFT abo use Klever I-NFT Marketplace ngaphakathi kwe-Exchange yethu, imakethe eku-inthanethi efinyeleleka kubasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingu-3.5 emhlabeni wonke, okubavumela ukuthi bafinyelele izethameli eziningi.
Noma yimuphi umsebenzi wobuciko ongadalwa ngedijithali ubizwa ngokuthi ama-NFTs. Muva nje, i-CEO yomsunguli we-Twitter uJack Dorsey uthengise i-tweet yakhe yokuqala ngezigidi zamaRandi, ama-NFT amaningi athengiswe ngezigidi ngezindlu zendali ezisunguliwe ezifana ne-Southey's, Christie's, abanye.
Ngo-2021, ama-NFT athole amandla, njengoba iningi lamaphrojekthi we-crypto sethule ama-NFT, kanti u-2022 kuzoba unyaka, lapho kungaxoxiswana khona nge-NFTs. Kleverkalula futhi kalula.
Isilinganiselwa: 4.95 Amavoti: 41
Disclaimer: Lesi sihloko senzelwe izinjongo zolwazi kuphela. Ulwazi aluhlanganisi isithembiso sokuthenga noma ukuthengisa, noma isincomo noma ukugunyazwa kwanoma imiphi imikhiqizo, amasevisi, noma izinkampani. Klever.Ezezimali azinikezi iseluleko sezezimali, sentela, sezomthetho, noma sokubalwa kwezimali. Akukho sibopho ngasohlangothini lwenkampani noma umbhali nganoma yikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala okuvela noma okuhlobene nokusetshenziswa noma ukuthembela kunoma yikuphi okuqukethwe, izimpahla noma izinsizakalo ezishiwo kulesi sihloko.
Ukhozi lokuqukethwe, intatheli nombhali onogqozi lokuhlola ubuchwepheshe obusha obungashintsha izimpilo zabantu. Ujoyinile Klever ukwenza i-Crypto ibe lula. Ukubika nokubhala ku-crypto & blockchain eminyakeni embalwa edlule. Kuphinde kubikwe futhi kubhalwe kwezolimo nokudla, ezokuthutha, ingqalasizinda, insimbi nokunye okuningi.
Ukushintshwa kwe-SOL kuyatholakala ku Klever Wallet
U-Solana, owaziwa nangokuthi umbulali we-Ethereum, manje ungomunye wamaphrojekthi aphezulu we-crypto ayi-10 abasebenzisi abangabambelela kuwo. Klever Shintsha.
Ingabe u-Doge uguqulele ku-Shiba Inu?
Ngenxa yokufana komkhiqizo, indlela, kanye nezethameli, abasanda kungena emakethe ye-crypto bayazibuza, ingabe u-Doge uguqulele ku-Shiba Inu?
Joyina Klever umphakathi
Ukukhula ndawonye sinamandla.
Qiniseka ukuthi uyasilandela ezinkundleni zokuxhumana ukuze uhlale unolwazi lwakamuva.
Twitter Youtube I-Telegraph-indiza Instagram Facebook-f I-Discord
Thola Imali nge Klever
Indawo yeMakethe yeNFT
Sisebenzisa amakhukhi kuwebhusayithi yethu ukukunikeza ulwazi olufanele kakhulu ngokukhumbula izintandokazi zakho nokuphinda ukuvakasha. Ngokuchofoza "Yamukela Konke", uyavuma ukusetshenziswa kwawo WONKE amakhukhi. Kodwa-ke, ungavakashela "Amasethingi Amakhukhi" ukuhlinzeka ngemvume elawulwayo.
Izilungiselelo ze-CookieYamukela Konke